Is Starting a Business Risky - Sicko News
Meheraddu ma halisbaa? Haddii aad fursad u heshay inaad shaqadaada joojiso oo aad ganacsi bilowdo, miyaad qaadan lahayd? Khatar intee le’eg ayuu ganacsaduhu qaadanayaa markii uu bilaabayo ganacsi? Hagaag, waxaad kaheleysaa jawaabaha aad hoosta ka dooneysid.
“Si aad maanta maal u sameysatid, waa inaad adigu iskaa u shaqeysataa.” – J Paul Getty
Waxaan dhisay ganacsiyo anigaana wali ciyaarta ku jira; Waxaan goob joog u ahaa kor u kaca iyo hoos udhaca meheradda, sidaas darteed waxaan aaminsanahay inaan uqalmay inaan ka hadlo mowduuca halista dhismaha ganacsiga. Hadda ma bilaabmaysaa ama dhisid ganacsi waa halis? Jawaabtaydu waa Haa iyo Maya.
Waxaan ku qasbay dadku inay iweydiyaan sida ay ganacsi u bilaabi karaan oo ay ugu guuleysan karaan khatar la’aan. Aniga oo ka jawaabaya iyaga, marwalba waan qoslaa oo waxaan u sheegaa inay khatartu marwalba qayb ka noqon doonto ganacsiga. Tirakoobka ayaa muujinaya in sagaal ka mid ah tobankii ganacsi ay bilaabeen; ku guuldaraystaan ​​shantii sano ee ugu horreysay. Tani waxay ka dhigan tahay in boqolkiiba 90 dhammaan ganacsiyada ay ku guuldareystaan ​​shantii sano ee ugu horreysay. Haddii tirakoobkani yahay wax la sii marayo, ka dib bilaabida ganacsi xaqiiqdu waa safar halis ah.
Bilaabida ganacsi waxay la mid tahay dhismaha markab iyo fuulitaanka safarka, oo ku hubaysan qorshe, khariidad iyo koox. Waa inaad ku shiraacdaa hubanti la’aan duufaanta iyo cimilada aan la saadaalin karin. Haddii markabkaagu quusto, waa inaad ka joogsataa ama aad dib ugu dabaasho xeebta, dhisato markab cusub oo markale shiraacdaa. ”- Ajaero Tony Martins
Waxaan dhistay dhowr ganacsi oo guulo leh waxaan sidoo kale soo maray waxoogaa fashil ah oo cajiib ah; Hadana, waxaan rabaa inaan tilmaamo in bilaabida ama dhisida meherad aysan ahayn inay qatar gasho. Dadka badankood way ka xishoodaan inay ganacsi bilaabaan sababtoo ah waxay ka baqayaan inay ku guuldareystaan. Waxaan lahaa asxaab la yimid fikrado ganacsi iyo qorshayaal cajiib ah laakiin sanadba sanadka ka dambeeya; kaliya waxay ku fadhiyaan fikradooda, iyagoo sugaya waqtiga ugufiican ee ay wax ku qabtaan. Mid ka mid ah sababaha ay asxaabteyda asxaabteyda ah aysan waligood ugu shaqeyn doonin fikradooda waa sababta oo ah waxay ka baqayaan inay halis galaan; waxay rabaan inay lumiyaan lacagtooda. Si aan kuugu daacad noqdo, waan fahamsanahay cabsidooda.
“Raadso talooyinka halista maalqabeennada wali khatarta ku jirta, hana ka helin saaxiibo aan ku dhiirran wax ka badan kubadaha cagta.” – J Paul Getty
Sida wakhtigan aan qorayo maqaalkan, anigu waxaan ku guda jiraa hawlo aan kaga bilaabayo shirkad tignoolaji oo xoqata. Kaddib marka aad qorto qorshe ganacsi oo aad falanqeyso halista ku xeeran meheradda; Waxaan garwaaqsaday inay jirto fursad boqolkiiba 50 ah oo ah in shirkadani waligeed horumar noqon doonin. Hadana, waxaan ku socdaa mashruuca. Sabab? Sababta aan horay ugu bilaabayo shirkad tikniyoolajiyadda waxaa sabab u ah abaalmarinta igu dhici karta.
“Khibrada ayaa i baray dhawr waxyaabood. Mid ka mid ahi waa in la dhegeysto mindhicirkaaga si kasta oo ay u wanaagsan yihiin wax warqad ku qoran. Midda labaad waa inaad guud ahaanba ka fiicnaato inaad ku dhejiso waxa aad taqaanid tan seddexaadna waa mararka qaarkood, maalgashigaaga ugu fiican waa midka aadan sameynin. ”- Donald Trump
Noloshu lafteedu waa halis. Marka markaan la kulmo xaalad ku lug leh heer gaar ah oo qatar ah; Waxaan falanqeeyaa khatarta noocaas ah marka la barbar dhigo abaalmarinta suurogalka ah iyo kartideyda halista leh. Haddii abaalmarinnada ay aad uga badan yihiin halista ku jirta mashruucu wuxuu ku jiraa awooddayda qatar gelinta; Waan la socon doonaa. Iminka anigoo adeegsanaya shirkaddayda tikniyoolajiyada ee soo jeedinta ah sida daraasadda daraasadda, haddii ay ku guuldareysato sida qaar ka mid ah meheradahayga ay horey u sameeyeen, waxaan lumin doonaa boqolkiiba 100 caasimada aan maal gashaday. Laakiin haddii ay guuleysato, waxaan u taaganahay inaan ku helo boqolkiiba 1000 ama kabadan maalgashigeygii ugu horreeyay. Xaqiiqdii, haddii arrimuhu u socdaan sidii qorshihiisu ahaa oo kooxdayduna ay awood u leedahay inay dabaysha duufaanka ka dhigto; Waxaan ku sameyn karaa soo laabasho aan xadidneyn oo ku saabsan maalgashigeyga. Laakiin xusuusnow, waxaan wali halis ugu jiraa in aan lumiyay caasimadayda oo dhan.
Waa inaad qatar gelisaa, labadaba adoo adeegsanaya lacagtaada ama lacag amaahatay. Qaadashada halista waxay muhiim utahay koritaanka ganacsiga. ”- J Paul Getty
Ganacsigu waa qatar laakiin khatarta badan ee jirta ayaa ah inaad ka waantowdo warshadaha aad ka faa iideysanayso. Waxa khatarta ugu badan keenaya waa mid aan fiicnayn oo aan lahayn xirfadihii loo baahnaa ee lagu dhisi lahaa ganacsi guul leh. Waxa khatarta ah waa in la bilaabo ganacsi leh qorshe aad u liita oo qoran oo aan awood u yeelan lafa-gurista khatartaada si loo gaaro saami qaybsiga. Waa maxay khatarta aan la hubin karin khatartaada dhalida halista si loo ogaado inta khatarta ah ee aad qaadi karto?
Ma jiraan ganacsi xun ama fursado maalgashi. Waxaa jira oo keliya ganacsato xun iyo maal-gashadeyaal. ”- Rich Dad
Qodobka kale ee aan doonayo inaan ku nuuxnuuxsado waa in dhismaha meheraddu khatar tahay; hase yeeshe, way mudan tahay khatarta maxaa yeelay abaalmarinnada ayaa ah mid aan la tirin karin. Mark Zuckerberg wuxuu Facebook.com ka bilaabay xoq wuxuuna ku koray boqortooyo qiimaheedu gaadhayo balaayiin doolar. Wuxuu halis galay dhowr kun oo doolar maantana, wuxuu ka qiimo badan yahay bilyan doolar. Isla sidaas ayey u socdaan Jeff Bezos, Larry Page, Steve Jobs, Debbi Fields, Bill Gates, Larry Ellison, Richard Branson, Aliko Dangote, Robert Kiyosaki, Donald Trump, iwm. duruufaha ku xeeran ganacsigooda.
Ugudambeyn, laguugu cabbirayn maayo sida aad u shaqeyso laakiin waxa aad ugu dambeyntii ku guuleysatay. ”- Donald Trump
Gabagabadii, waxaan rabaa in aan dib u noqdo
business idesas business tips Is Starting a Business Risky Is Starting Business Risky Starting a Business Risky